Vashandi veHurumende Vokurudzira Hurumende Kuvawedzera Mihoro Mwedzi Uno
Zvita 02, 2019
Vashandi vehurumende vakamboedza kuratidzira mwedzi wapera, asi vakazorambidzwa nemapurisa.
Kunetsana pakati pehurumende nevashandi vayo kuri kutarisirwa kuenderera mberi mushure mekunge hurumende yati ichakwanisa chete kuti itaure nezvekuwedzera vashandi vayo mari dzemihoro mubhajeti regore rinouya.
Izvi zvinotevera kunyorwa kwetsamba nesangano rinomirira vashandi vehurumende, reApex Council, kuhurumende richikurudzira kuti itarisise nekukasika mihoro yevashandi kuitira kuwedzera mihoro iyi mumwedzi uno waZvita kuitira kuti vakwanise kurarama.
Munyori wesangano iri, VaDavid Dzatsunga, vanoti sangano ravo rasvitsa tsamba dzenyunyuto kugurukota rezvevashandi nemabasa, Muzvinafundo Paul Mavhima, gurukota rezvemari, Muzvinafundo Mthuli Ncube, pamwe nekuboka rinoona nezvevashandi vehurumende, rePublic Service Commission vachikumbira kuti vaite navo musangano wechimbichimbi wekuzeya mihoro yevashandi.
VaDzatsunga vanoti vashandi vehurumende vakamborerutsirwa zvishoma mumwe waMbudzi mushure mekupiwa mari dzemabhonasi, asi hadzina kure kwadzakavasvitsa, izvo zvaita kuti vachemere kuwedzerwa mari nekukasika.
Vanoti sangano ravo riri kuda kuti mushandi wepasi ange achitambiriswa madhora mazana mana nemakumi mashanu emari yekuAmerica, asi ichibhadharwa zvinoenderana nehuremu hwedhora rekuAmerica pazuva racho, kana kuti interbank rate.
Vashandi vehurumende vakamboedza kuratidzira mwedzi wapera vachida kunosiya magwaro enyunyuto kumahofisi emakurukota, asi vakazorambidzwa nemapurisa.
Asi gurukota rezvevashandi, Muzvinafundo Mavhimam vanoti hurumende haina zvairi kukwanisa kuita mugore rino, vachiti zvekuwedzera vashandi mari zvinototarisirwa kuzoiswa mubhajeti regore rinouya.
Vachitaura neStudio 7 vari kuAbidjan, kuIvory Coast, uko vari kupinda musangano weILO mudunhu reAfrica, VaMavima vati kunyange hazvo vanga vasati vaona tsamba inonzi yatumirwa kuhofisi kwavo neAppex Council, hapana chakaipa kuti vasangane nevamiriri vevashandi vehurumende vehurumende ava.
Zvichakadaro, sangano rinomirira vanachiremba vehurumende, reZimbabwe Hospital Doctors Association riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dzimire kunyorera kuti dzipinzwe muchirongwa chekubhara vanachiremba chiri kutungamirwa nekambani ye Highlife Foundation, iyo iinotungamirwa namuzvinabhizimusi Strive Masiyiwa.
Gwaro raburitswa nesangano iri sangano iri ratora danho iri mushure mekuona kuti Highlife Foundation iri kushandisa nzira dzekumanikidza vanachiremba kutambira hurongwa hwayo uhwu.
ZHDA inoti iri kutambira mashoko ekuti vanachiremba vari kumanikidzwa kusaina magwaro ekudzokera kubasa, uye hurumende iri kuda mazita avanachiremba vakanyorera kudzoka kubasa, unove munongedzo wekuti iri kushanda pamwechete neHighlife Foundation.
Matunhu Ose eZimbabwe Ave neMunhu Abatwa neCoronavirus
VaChamisa Vokurudzirwa Kudzokera kuVanhu Zvichitevera Mutongo waVaChitapi